I-Visa yase-Austria | IVisa eAustria | natvisa.com
Isicelo seAustria Visa kwi-Intanethi
Wonke umntu ocwangcisa uhambo oluya e-Austria kufuneka aqale afumane i-visa. Olu luxwebhu olubaluleke kakhulu ekufuneka wonke umhambi alufumane ukuze angene ngokusemthethweni kumda welizwe. I-Austria ibonelela ngeentlobo ezi-3 ze-visa ezinje nge-Schengen Visa (VISA C), i-Visa yeSizwe yase-Austrian (i-VISA D) kunye ne-Airport Transit (VISA A). Ke ngoko abafaki-zicelo abafaka izicelo ezifanayo bayacelwa ukuba baqale babone injongo yotyelelo lwabo kwaye benze isicelo selungelo lokundwendwela ngokufanelekileyo.
Iinkcukacha zeVisa yaseAustria
Yintoni iVisa yaseAustria?
I-visa eya e-Austria luxwebhu olunyanzelekileyo ekufuneka wonke umntu ohamba kwelinye ilizwe alufumane xa etyelele i-Austria. Abafakizicelo kufuneka benze isicelo solu xwebhu ngaphambi kokuba bandwendwele ilizwe. I-Austria ibonelela ngeentlobo ezintathu ze-visa-iSchengen Visa (VISA C), iVisa yeSizwe yase-Austrian (iVISA D) kunye neTransitit Transit (VISA A). Iinjongo ezahlukeneyo ezinikwe i-visa eya e-Austria zezi; undwendwela izalamane nabahlobo, amashishini, ufundelo nokhenketho. Ngaphambi kokufaka isicelo sevisa, abafaki-zicelo kufuneka baqiniseke ngeenjongo zabo zokundwendwela ilizwe kwaye bakhethe uhlobo lwevisa ngoku.
Isidingo sokufaka iVisa yaseOstriya
Ngaphandle kwenjongo yotyelelo, abafaki-zicelo kufuneka babonelele ngala maxwebhu alandelayo ngelixa befaka isicelo se-visa yabo e-Austria.
Ukungenisa ifom yesicelo se-visa esigcwalisiweyo luxwebhu lokuqala abafaki-zicelo ekufuneka bangenise ukuze baqalise inkqubo ye-visa.
Abafaki-sicelo kufuneka babe nepasipoti esemthethweni kunye nokunyaniseka kweenyanga ezili-6 (kunye nokusebenza kweenyanga ezi-3 ukusuka kumhla wokuhamba) ubuncinane iphepha le-2 elingenanto, ikopi ekhishwe kwiphepha leenkcukacha zepaspoti, ifoto yesayizi yepaspoti Umenzi-sicelo (ucofe hayi ngaphezulu kweenyanga ezi-6 phambi kokungeniswa)
Ukungena kwangaphambili okanye ukuphuma kwezitampu ze-visa (ukuba zikhona), incwadi yokuqinisekisa ukuqeshwa (ukuba ikhona), ukubhukishwa kwenqwelomoya, ubungqina bomshuwalense wezempilo, ubungqina bendawo yokuhlala, ubungqina bokuqeshwa (ukuba kufanelekile), ubungqina bemali, njl.
Umyalelo wabakhenkethi abafaka isicelo seVisa yaseOstriya
I-visa yeSchengen iyafumaneka kubemi bala mazwe alandelayo iBelgium, iRiphabhlikhi yaseCzech, iDenmark, i-Estonia, iFinland, iFrance, iJamani, iGrisi, i-Hungary, i-Iceland, i-Itali, i-Italiya, iLatvia, iLichtenstein, iLithuania, iLuxembourg, iMalta, iNetherlands, iNorway, iPoland, IPortugal, iSlovak Republic, iSlovenia, iSpain, iSweden neSwitzerland.
Urhulumente wase-Austria ubonelela ngeentlobo ezintathu ze-visa kubakhenkethi abavela kumazwe angaphandle. I-visa yimvume yokuhamba efuna ukuba abahambi bangene e-Austria.
Ngawaphi amaxwebhu ayimfuneko ukufaka isicelo seVisa yase-Austria?
Abafaki zicelo kufuneka babe nekopi ekhutshiweyo kwiphepha leenkcukacha zakho zencwadana yokundwendwela, ubungakanani bepasipoti yomfaki sicelo (ucofe hayi ngaphezulu kweenyanga ezi-6 ngaphambi kokungeniswa), ukungena kwangaphambili okanye ukuphuma kwezitampu zevisa (ukuba zikhona), incwadi yokuqinisekisa yokuqeshwa (ukuba ikhona ), ukubhukishwa kwenqwelomoya, ubungqina bomshuwalense wezempilo, ubungqina bendawo yokuhlala, ubungqina bokuqeshwa (ukuba kufanelekile), ubungqina bokuba nemali, njl.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka ebonisiwe ekufikeleleni e-Austria?
Ukufika kwabo e-Austria, abafaki-zicelo kufuneka babonise i-visa yabo evunyiweyo kunye nepasipoti efanayo neyayisetyenziselwa ukwenza isicelo.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka enikezelwe njengobungqina bendawo yokuhlala?
Abafaki zicelo bangabonisa ikopi ekhutshiweyo yeenkcukacha zokubhukisha kwihotele okanye kwindlu yeendwendwe.
Yeyiphi imiqathango ekufuneka ipasipoti yomfaki sicelo ihlangane xa ufaka isicelo sokundwendwela e-Austria?
Ngaphambi kokufaka isicelo sokundwendwela e-Austria, incwadana yokundwendwela yomenzi-sicelo kufuneka isebenze iinyanga ezi-6 (kwaye isebenza ezinyangeni ezi-3 ukusukela kumhla wokuhamba).
Abafaki-zicelo baya kuyifumana njani ingcaciso malunga nenqanaba labo levisa?
Abafakizicelo banokujonga iwebhusayithi karhulumente ukuze bafumane ulwazi lwevisa.
Ngaba abafaki-zicelo bayacelwa ukuba bachaze imbovane ngalo naluphi na uxwebhu xa behamba nomntwana?
Ewe, abafaki-zicelo kufuneka babe nesatifikethi sokuzalwa somntwana okanye incwadi yemvume evela kumgcini wakhe okanye kubazali.
Ngaba abafaki-zicelo baya kufumana nayiphi na imbuyiselo yokwaliwa kwesicelo se-visa?
Hayi, abafaki-zicelo abayi kuhlawulwa nayiphi na imali njengembuyekezo.
Yintoni abafaki-zicelo abafuna ukujonga inqanaba labo lokundwendwela?
Abafakizicelo kufuneka basebenzise inombolo yesalathiso kwirisithi yabo ukujonga imeko.
Umfaki-sicelo kufuneka atyelele iziko lesicelo sevisa ukuze ayokuthatha ii-visa zabo.